I-Seashell flat - phambi kolwandle - I-Airbnb
I-Seashell flat - phambi kolwandle
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguBraulio
Indawo epholileyo kunye nesandula ukulungiswa ebekwe kuNxweme olusemantla eLanzarote, kwidolophu ezolileyo yasePunta Mujeres kanye ngaselwandle. Yiva indlela yokuphila yaseLanzarote kwaye wonwabele izinto ezibalulekileyo zokuhlala kwindlu eselunxwemeni.
Yonwabela ithala labucala elijongene noLwandlekazi lweAtlantiki, apho ukonwabela isidlo sakusasa ngemibono emangalisayo ngexesha lokuphuma kwelanga okanye iglasi yewayini ngokuhlwa ngelixa uphulaphule amaza.
Abantu aba-4 balala kakhulu.
Indlu enomtsalane ebekwe kuNxweme olusemantla eLanzarote, kwidolophu ezolileyo yasePunta Mujeres ngasekunene kolwandle. Yiva indlela yokuphila yaseLanzarote kwaye wonwabele izibonelelo zokuhlala kwindlu eselunxwemeni.
Vuka kwaye uphume kwimpepho yolwandle, hlala ethafeni nekofu yakho ngaphambi kokuba uqubhe kwangoko kunxweme oluhle lwasePunta Mujeres. Ukuba imozulu ayikuvumeli ukuqubha, nto leyo enqabileyo, le ndlu ikwindawo egqibeleleyo yokuqalisa uhambo olupholileyo ngaselunxwemeni ukuya kwilali ekufutshane yase-Arrieta okanye kwelinye icala kuhambo olunzima.
Jabulela i-terrace yangasese ejongene noLwandle lweAtlantiki, apho umntu anokonwabela isidlo sakusasa ngemibono emangalisayo ngexesha lokuphuma kwelanga okanye iglasi yewayini ngokuhlwa ngelixa ephulaphule amaza.
Le ndlu inamagumbi amabini okulala, i-master Suite inebhedi ephindwe kabini kwaye yonwabela igumbi lokuhlambela, igumbi lesibini lineebhedi ezimbini ezinegumbi lokuhlambela. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeembiza, iipani, i-cutlery kunye nazo zonke izixhobo onokuzifuna ukuze upheke ngokugqibeleleyo izidlo zakho ozithandayo.
IPunta Mujeres inesixa esikhulu samadama okuqubha endalo aneemilo kunye nobukhulu obahlukeneyo, ngoko ke nokuba uyafuna ukuqubha ixesha elide okanye ulale nje esantini, ngokuqinisekileyo uya kufumana ichibi elikufanelayo nje uhambo olufutshane ukusuka ekhaya. . Le ndlu ikwindawo entle yePunta Mujeres efikelela kumtsalane wabakhenkethi eJameos del Agua kwelinye icala kunye nolwandle oluhle lwase-Arrieta (La Garita) ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 yokuhamba ukuya kwelinye.
Umbuki zindwendwe ngu- Braulio
Ungalibali iimbadada zakho kunye neesuti zakho zokuqubha.
Ungalibazisi ukucela iingcebiso kummkeli wakho malunga neendawo zokutyela, uhambo okanye iindawo onokuzindwendwela. Sinokukunceda ulungelelanise ukuqesha imoto yakho, iibhayisekile, ukukhwela intaba kunye nayo nayiphi na eminye imisebenzi enokuba nomdla kuwe. Siya kuvuya ngakumbi ukunceda.
Ungalibazisi ukucela iingcebiso kummkeli wakho malunga neendawo zokutyela, uhambo okanye iindawo onokuzindwendw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Punta Mujeres